အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ ကလေးစက်ဘီးဘဲလ်? အကောင်းဆုံး ကလေးစက်ဘီးဘဲလ် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှရှာဖွေရန်။
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. တစ်ဦးနာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောထုတ်လုပ်သူ, ပို့ကုန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ကလေးစက်ဘီးဘဲလ်။ သူတို့ပူဇော်သောအရာမှာစျေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်သူတို့ ပို. ဆွဲဆောင်မှုနဲ့တွန်းလှန်ပါစေ။ ကျနော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်ကမ္ဘာအနှံ့မှမိတ်ဆွေများကရှိသမျှတို့သည်အ time.so မှာကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုကျွန်တော်တို့နှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အခမဲ့ခံစားကြည့်စေလိုပါသည်။
ပုံစံ - JH-F7/JH-2001/JH-812P
ထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10 PC/အကွက် ၂၀၀ PCS/CTN.၂.၇ ပေ.
ဆး.ဒဗလျူ.:၁၂ ကီလိုဂရမ်.ဆ.ဒဗလျူ.:၁၄ ကီလိုဂရမ်.
ဟမ်ဘာဂါပုံစံ–အထင်ကြီးတယ်&ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည် ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/childs-bike-bell.html
အကောင်းဆုံး ကလေးစက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ကလေးစက်ဘီးဘဲလ် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ကလေးစက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
ITEM:ဖား ဦး ချိုDES:ရာဘာမီးသီးနှင့်အတူ PP နီယွန်ကိုယ်ထည်,အရွယ်အစား:၆၈*၁၀၀ မီလီမီတာသုံးပါ:အမြန်ထုတ်လွှင့်ကွင်းအဘို့:၂၂.၂&၂၅.လက်ကိုင်ဘား ၄ ခုထုပ်ပိုးသည်:1 pc/အိတ်,10 PCs/box 100 PCs/ctnဆး.ဒဗလျူ.:6 KGS G.ဒဗလျူ.:8 KGS CUFT:၁.5မူရင်း:ထိုင်ဝမ်မှာလုပ်ပါ ချစ်စရာဒီဇိုင်း-စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောအသွင်အပြင်သည်ဆိုင်ကယ် ဦး ချိုကိုထူးခြားသောအနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်,ဒိုးနတ်ဒီဇိုင်းပါသောသေးငယ်ပြီးလုံးဝန်းသောရော်ဘာဘောလုံးကို၎င်း၌ချစ်စရာကောင်းပြီးစတိုင်ကျသောအရာတစ်ခုထည့်ပါ.ကလေး၏စက်ဘီး ဦး ချိုကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်’s စက်ဘီး.လူကြီးများနှင့်ကလေးများသည်လက်တွေ့ကျပြီးလှပသော ဦး ချိုကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်. တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်-ဝက်အူလှည့်ပြင်ဆင်ပါ,ဝက်အူတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးစက်ဘီးလက်ကိုင်ဘားတွင်ပလတ်စတစ်ကလစ်ကိုထည့်ပြီး၎င်းကိုထည့်ပါ.စက်ဘီး၏ ဦး ချိုအရွယ်အစားသည် universal စက်ဘီးနှင့်လိုက်ဖက်သည်,၎င်းကိုစက်ဘီးမှအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်. လုံခြုံပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ-ရာဘာဖားကို ဦး ချိုပေါ်ညှစ်ချခြင်းဖြင့်ထူးခြားသောဟိန်းသံဖြင့်လမ်းရှင်းပါ,မမှားနိုင်သောအသံကမင်းကိုလူတိုင်းသိစေနိုင်တယ်’လာနေတယ်. ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှု-ဤဂန္ထဝင် retro စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်တောင်တက်စက်ဘီးအတွက်အသုံး ၀ င်သည်,မြို့စက်ဘီး,အားကစားစက်ဘီး,ကလေး’s ဆိုင်ကယ်ခေါက်စက်ဘီးစကူတာ,စသည်တို့.,စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်,သို့မဟုတ်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများကိုလက်တွေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ပါ သင်၏စက်ဘီးကိုသင်၏စက်ဘီးပေါ်တွင်စွဲဆောင်မှုရှိစေရန်သင်လိုချင်သောပုံစံကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ.